FAQ - Shijiazhuang Huabang Imp&Exp Trade Co., Ltd.
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro. Ho an'ny famokarana faobe, ny fotoana nitarika dia 20-30 andro taorian'ny nandraisany ny fandoavam-bola. Mandaitra ny fotoana fitarihana rehefa (1) nahazo ny petra-bola nataonao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany momba ny vokatrao izahay. Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fe-potoanao ny fotoana fitarihana, azafady mba diniho ny zavatra takinao amin'ny fivarotanao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome izay ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.